London Trip to Attend One Young World Summit (Visiting around the town) | The World of Pinkgold
လန်ဒန်က အတော်လေးကို အေးပါတယ်. ပြင်ဦးလွင်က အဖိုး အဖွား အဘေး ခေါ်ရလောက်အောင်ကို အေးပါတယ်။ ဒီက အနွေးထည်တွေ အများကြီးယူသွားပေမယ့် သိပ်အချမ်းမလုံပါဘူး။ မနေညိုက Jacket တစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးလို့ တော်ပါသေးတယ်။ Steve ရဲ့ ညီမကို တစ်နေရာမှာ ၀င်ခေါ်တယ်.. ပြီးတော့ KFC က ကြက်ကြော်နဲ့ အာလူးကြော်တွေ အအေးတွေဝယ်ပြီး ကားပေါ်မှာပဲ ညစာစားလိုက်ကြတယ်။ လန်ဒန်ရဲ့ အထင်ကရနေရာတွေဖြစ်တဲ့ London Eye, London Bridge, St. Paul Church, Big Band ကို ကားပေါ်ကပဲကြည့်ခဲ့တယ်။ စနေညဖြစ်တာကြောင့် လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားတဲ့ သူတွေလည်းများတယ်.. သူတို့ဆီမှာက သောကြာနေ့ညနေတို့ စနေနေ့ညနေတို့ဆိုရင် အလှတွေပြင်ပြီး ညဘက်လမ်းထွက်ကြတာကိုး.. တစ်ချို့ကောင်လေး ကောင်မလေးတွေဆို အုပ်စုလိုက်ကြီး လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်အော်နေကြသေးတော့ ကျွန်မ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် လွမ်းချင်ချင်ဖြစ်သွားတယ်။
တစ်နေရာမှာ ကားရပ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်.. Steve က ငါပြန်ရောက်ရင် ချက်ချင်းပုံတွေ တင်ပေးလိုက်မယ်တဲ့.. ပင့်ဂိုလ်း လန်ဒန်ရောက်နေပြီဆိုတာ ဖေ့စ်ဘုတ်က သူငယ်ချင်းတွေသိအောင်တဲ့။ နည်းနည်းလောက်ထပ်လည်ပြီးတော့ မနေညိုတို့အိမ်ကို ပြန်လိုက်ပို့တယ်.. ပြီးတော့ Steve တို့မောင်နှမလည်း ပြန်သွားကြတယ်။ ပြန်ရောက်တော့ အတော်လေး ညနက်နေပြီ။ ရောက်တာနဲ့ အ၀တ်အစားလဲပြီး ဆက်အိပ်တော့တာပါပဲ။
နောက်နေ့မနက်ကျွန်မနိုးတော့ မနက်ကိုးနာရီလောက် ရှိပြီထင်တယ်။ အပြင်ကို တံခါးလေး ဘာလေးဖွင့်ကြည့်ပေမယ့် မိုးမလင်းသေးပါဘူး။ သူတို့ကလည်း ပြောတယ်.. ဆောင်းရာသီဆို လန်ဒန်က နေမမြင်အင်ပါယာ ဖြစ်နေတာတဲ့။ နေထွက်တဲ့ရက်ဆိုတာ အတော်လေးရှားတယ်တဲ့။ မနက်စာတွေ ဘာတွေစားပြီးတော့ ချမ်းမြစိုးတို့ကို မနေညိုက ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်.. ပင့်ဂိုလ်းငါ့အိမ်ရောက်နေတယ်.. နင်တို့ရဲ့ လူကြုံတွေလည်းပါလာတယ်… လာယူတဲ့။ သူတို့လည်း လာမယ်ပေါ့လေ။ ခဏနေတော့ ကျွန်မတို့ Walthamstow Shopping Mall ကိုသွားကြတယ်.. နေ့လည် ၁၁ နာရီလောက်ထိုးနေပေမယ့် တစ်ကယ်ကို နေမထွက်ပါဘူး.. အဲ့မှာ ဘာပဲဝယ်ဝယ် တစ်ပေါင်ပဲ ပေးရတယ့် တစ်ပေါင်ဆိုင်လည်းရှိတယ်.. Cosmetic တွေလည်း အတော်ကိုဈေးသက်သာတယ်.. Promotion တွေလုပ်နေတာ.. Asda Supermarket မှာတော့ စားစရာ သောက်စရာတွေ ၀ယ်တာပေါ့.. ကျွန်မယူလာတဲ့ ကင်မရာက အဆင်မပြေဖြစ်သွားလို့ Curry Digital မှာ ကင်မရာတစ်လုံး ၀င်ဝယ်လိုက်ရသေးတယ်.. Memory Card + camera က 77 ပေါင်ပေးရတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်မ ကင်မရာ အသစ်ရလို့ ပျော်တာပေါ့။
မနေညိုနဲ့ အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်းက အဲ့နားက Library မှာ ကျွန်မတို့ကိုစောင့်နေတယ်.. အဲ့မှာက Wireless လည်းရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့လည်း ဈေးဝယ်ပြီးတာနဲ့ လိုက်သွားကြတယ်.. အဲ့မှာ အင်တာနက်သုံးတော့ Steve က ကျွန်မပုံကို ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တင်ထားတာ တွေ့တယ်.. Comment တွေဘာတွေတောင် အောက်မှာပေးထားကြပြီ။ အဲ့မှာ One Young World ကိုလာကြတဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံကလူတွေ ကျွန်မကို မက်ဆေ့တွေပို့ပြီး ကျွန်မ အခန်းနံပါတ်ကို မေးထားကြသေးတယ်.. ငါတို့ရောက်နေပြီ နင့်ကိုလည်း မတွေ့ဘူးတဲ့.. ကျွန်မလည်း အကျိုးအကြောင်းလေး ပြန်ပြီး မက်ဆေ့ပို့ရသေးတာပေါ့။ ခဏနေတော့ အိမ်ကိုပြန်လာပြီး နေ့လည်စာစားတယ်။ ချမ်းမြစိုးတို့လည်း ရောက်လာတယ်။ လေလေး ဘာလေးပေါတာပေါ့။ နောက်တော့ သူတို့လည်း ပြန်သွားကြတယ်။
With my friends staying in London
သူတို့ပြန်သွားတော့ ကျွန်မတို့လည်း လျှောက်လည်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြန်စတာပေါ့.. လန်ဒန်မှာက ဘတ်စ်ကားတွေ ရထားတွေစီဖို့ Oyster Card ကိုသုံးတယ်.. ကျွန်မက ဧည့်သည်ဆိုတော့ ကဒ်လည်းမရှိတာနဲ့ ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ဝယ်ဖို့လုပ်ရတယ်.. အနားမှာရှိတဲ့ Walthamstow Station မှာပဲဝယ်ဖို့ရှာတယ်.. လန်ဒန်ကလူတွေ အရမ်းအချိန်တိကျပါတယ်.. လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်က လေးနာရီကို ပိတ်တာ.. ကျွန်မတို့သွားတော့ လေးနာရီထိုးကာနီးပြီ.. အဲ့မှာလက်မှတ်ရှိလား.. ဘာညာမေးနေတုန်း လေးနာရီထိုးသွားတော့ Customer ကိုတောင် ဂရုမစိုက်ဘူး.. ဆိုင်ကြီးပိတ်ချပြီး ပြန်သွားတယ်.. အချိန်တိကျတာပြောပါတယ်.. ဒါနဲ့ကျွန်မတို့လည်း နောက်တစ်ဆိုင်ကို ထပ်သွားပြီး ၀ယ်ရတာပေါ့.. လက်မှတ်တစ်စောင်ကို သုံးပေါင်ခွဲပါ.. တစ်နေကုန် ဘာကားစီးစီး ဒီလက်မှတ်ကို Driver ကိုပြပြီး စီးရပါတယ်။ သုံးပေါင်ခွဲက တစ်ရက်စာဖိုးပေါ့.. ကျွန်မတို့တွေ နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားကြီးတွေစီးပြီး သွားတယ်.. Oxford Circus ကို အရင်သွားတယ်.. မြန်မာပြည်မှာဆို ဆူးလေက ဖရေဇာပေါ့ရှင့်.. အဲ့နေရာက ဈေးဆိုင်တွေ စတိုးဆိုင်တွေလည်း အရမ်းများပြီး လူလည်းအရမ်းစည်တဲ့နေရာပေါ့။ ဈေးဝယ်လို့လည်း ကောင်းတဲ့နေရာပါပဲ။ ကျွန်မကတော့ ဘာမှဝယ်မလာပါဘူး… သူတို့ငွေနဲ့သာ ငါးပေါင် ခြောက်ပေါင်ဆိုပြီး ခေါ်လို့ကောင်းတာ.. မြန်မာငွေနဲ့က ၁၇၀၀ ကွာတာဆိုတော့ မသက်သာဘူးလေ။ အဲ့မှာ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် တွေ့တယ်.. Burma@Access တဲ့..အင်တာနက်သုံးခက တစ်နာရီကို တစ်ပေါင်ဆိုပဲ…. ကားပေါ်ကလှမ်းတွေ့တာဆိုတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ မမီလိုက်ဘူး.. လျှောက်သွားနေတုန်းမှာပဲ ကိုဘိုဘိုလန်းစင်လည်း ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်.. ဖိုးချမ်းပြောလို့တဲ့.. အဆင်ပြေလား ဘာညာပေါ့ရှင်။
Waiting bus at bus stop
ပြီှးတော့ China Town ကိုသွားကြတယ်.. အဲ့မှာပဲ ညစာစားကြတယ်.. ကျွန်မတို့စားတဲ့ဆိုင်က တရုပ်တွေ အချိုးမပြေလို့ ပြသနာနည်းနည်းဖြစ်ရသေးတယ်.. Customer ကို ဂရုမစိုက်ဘူး.. သူတို့လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေကြတာ။ နောက်တော့ Trafalgar Square လည်းရောက်တယ်.. Millennium Bridge ကိုလည်းရောက်တယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်မကို ဟိုတယ်ပြန်ပို့ကြတယ်.. အစကတော့ မန်းဒေးမနက်မှ ပြန်မယ်လုပ်ထားပေမယ့် မနေညိုလည်း မနက်ကို ရုံးသွားရမှာကြောင့် ကျွန်မကို Sunday ညကတည်းက လိုက်ပို့လိုက်တာပါ။ သူကတစ်ကယ်တော့ လန်ဒန်မှာ နေတာမဟုတ်ပါဘူး.. တစ်ခြားနေရာမှနေတာပါ…စနေ တနင်္ဂနွေမှ လန်ဒန်က သူ့သူငယ်ချင်းအိမ်ကို ခဏပြန်လာတာ.. ဟိုတယ်ကိုပြန်ဖို့ ကားတွေလည်း မှားစီး.. အဆင့်ဆင့်စီးဖြစ်သွားလို့ ကျွန်မတောင် ကားမူးပါသေးတယ်. ရန်ကုန်မှာတုန်းက တစ်ဒုန်းဒုန်း တစ်ဒိုင်းဒိုင်း ၄၅ တွေ ၄၈ တွေစီးတာ မမူးဘူး.. အမတို့လန်ဒန်က လေအိပ်ကားစီးမှပဲ မူးတော့တယ်လို့ ရီစရာတောင် ပြောဖြစ်သေးတယ်.. ဟိုတယ်ကို ရောက်တော့ ည ၁၁ နာရီလောက် ရှိပါပြီ။
A store in Oxford Circus
At Trafelgar Square
အခန်းထဲရောက်တော့ ကျွန်မနဲ့အတူနေမယ့် အခန်းဖော်ရောက်နေပြီ.. ဘူတန်က Trishina ပါ.. ကျွန်မနဲ့သူနဲ့က အစောကတည်းက Facebook မှာ သိကြပါတယ်.. သူက ညနေ (၆) နာရီလောက်ကမှ ရောက်တာတဲ့.. တွေ့တော့လည်း အချင်းချင်း နုတ်ဆက်ကြတာပေါ့.. မနေညိုလည်း စိတ်ချမယ်နော်ပင့်ဂိုလ်း ဆိုပြီး မှာစရာတွေ မှာပြီး ပြန်သွားတယ်.. မမှာပဲ နေမလားရှင် ကျွန်မ လျှပ်ပြာ လျှပ်ပြာဖြစ်တာကို တစ်ရက်လောက်အတူနေလိုက်တာ.. သူသိသွားတယ်လေ..။ မနေညိုပြန်သွားတော့ ဘူတန်က ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်မနဲ့ စကားနည်းနည်းဆက်ပြောပြီး ဒီနေ့အဖို့ အိပ်လိုက်ကြသည်ပေါ့ရှင်။